संसदीय निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिमा झलनाथ कि रामचन्द्र ?
Homeराष्ट्रिय खबरसंसदीय निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिमा झलनाथ कि रामचन्द्र ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै संसदीय चुनावको चटारोमा राजनीतिक दलहरु रहेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नतोकिँदै राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ । केहीले उम्मेदवारी दिने तयारीस्वरुप छलफलहरु अगाडि बढाएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेको सत्तारुढ दलहरुले पनि प्रदेश र संघको चुनावमा कसरी चुनावी तालमेल गर्ने भन्नेबारे छलफल अघि बढाएका छन् । संसदीय चुनावमा तालमेल गर्ने बहससँगै चुनावपछि कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषय पनि सत्तारुढ दलहरुभित्र पेचिलो बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको व्यवस्थापनको विषय झन पेचिलो बनेको छ ।
यसअघि पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई झलनाथ खनालले पनि दाबेदारी प्रस्तुत गरेकोले उनीहरु दुईमध्ये कसलाई सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भन्ने बहस सतहमा आएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मेख मार्न देउवालाई विनाशर्त प्रधानमन्त्री मान्न पुगेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अब उधारो आश्वासनमा नचल्ने प्रष्ट छ ।
रामचन्द्र पौडेलको व्यवस्थापन देउवाका लागि उत्तिक्कै पेचिलो बन्नेछ । एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको मन बुझाउन नसके जुनसुकै बेला पनि सत्ता गठबन्धन भत्किने र सरकार पनि ढल्ने देखेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको विषय अहिले ननिकाल्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, अहिले नै यसबारे प्रष्ट हुनुपर्ने र त्यसैअनुसारको तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले सत्ता गठबन्धनबाट आफूहरुले स्थानीय तह चुनावमा धोका पाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावमा जस्तै धोका दिने हो भने सत्ता गठबन्धनको अर्थ नरहने र नयाँ सिराबाट गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत बताएका छन् ।
आफ्नो सांसद पद नै धरापमा पारेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेकोले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने भन्दै खनाल त्यसैअनुसारको तयारीमा छन् ।
आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका देउवालाई भावी राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने अर्को चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ ।
कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा आफूलाई पार्टी सभापति बनाउन सहयोग गरेको गुन तिर्नका लागि पनि देउवाले पौडेललाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ ।